Paul's 1st Letter to the Corinthians – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / စီရင်သောဩဝါဒစာ / Paul's 1st Letter to the Corinthians
1 ကောရိန္သု 1
1:1 ရှင်ပေါလု, ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အားဖြင့်ယေရှုခရစ်၏တမန်တော်အဖြစ်ကိုခေါ်; နှင့်သုဿ, ညီအစ်ကိုတစ်ဦး:
1:2 ကောရိနသုမြို့၌ရှိသောဘုရားသခင်၏၏အသင်းတော်မှ, ယေရှုခရစ်၌ရှိသောသန့်ရှင်းစေသူတို့အား, သူတို့နှင့်ငါတို့အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအရပ်၌ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. သွန်းလောင်းပေးကြသူအားလုံးနှင့်အတူနေသောသန့်ရှင်းသူတို့သည်ဖြစ်ခေါ်.
1:5 ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်, ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုထဲမှာ, သငျသညျထိုသူ၌ချမ်းသာကြွယ်ဝဖြစ်လာကြပါပြီ, တိုင်းစကား၌ရှိသမျှကိုသိကျွမ်းခြင်း၌.
1:6 ဆိုတော့, ခရစ်တော်၏သက်သေခံချက်ကိုသင်၌ခိုင်ခံ့စေ၏ခဲ့.
1:7 ဒီလိုမျိုး, အဘယ်အရာကိုမျှမဆိုကျေးဇူးတော်၌သငျသညျမှချို့တဲ့သော, သင်တို့သည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ပေါ်ထွန်းစောင့်ဆိုင်းအဖြစ်.
1:8 ထိုမင်းသည်, လွန်း, သငျသညျခိုင်ခံ့စေမည်, ပင်ကုန်အထိ, အပြစ်မပါဘဲ, ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ထွန်း၏န​​ေ့တိုငျအောငျ.
1:9 ဘုရားသခငျသညျသစ်စာရှိသူဖြစ်ပါသည်. သူ့ကိုတဆင့်, သငျသညျမိမိအသားတျော၏ဆက်ဆံခြင်းပြီ, ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်.
1:10 ဆိုတော့, တောင်းပန်ပါတယ်, ကိုညီအစျ, by the name of our Lord Jesus Christ, that every one of you speak in the same way, and that there be no schisms among you. So may you become perfect, with the same mind and with the same judgment.
1:11 For it has been indicated to me, about you, ငါ့ညီအစ်ကိုတို့, by those who are with Chloes, that there are contentions among you.
1:12 Now I say this because each of you is saying: "စင်စစ်, ငါပေါလု၏ဖြစ်ကြောင်းကို;” “But I am of Apollo;” “Truly, I am of Cephas;” as well as: “I am of Christ.”
1:17 ခရစ်တော်ဗတ္တိဇံကိုမှငါ့ကိုမစေလွှတ်ဘဲအဘို့, ဒါပေမဲ့ဧဝံဂေလိမှ: မစကားလုံးမြား၏ပညာအားဖြင့်, အချည်းနှီးသောဖြစ်လာခရစ်တော်၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို စိုးရိမ်..
1:18 လက်ဝါးကပ်တိုင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆက်ဆက်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သောသောသူတို့အား foolishness သည်. သို့သော်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ကြသောသူတို့အဖို့, ကြောင်း, အကြှနျုပျတို့အား, ကဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်သည်.
1:19 ကမျြးစာလာခဲ့ပြီ: "ငါသည်ပညာရှိတို့၏ပညာသည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်, ငါသည်ထိုသမ္မာသတိရှိသော၏ပိုင်းခြားသိမြင်ငြင်းပယ်လိမ့်မည်။ "
1:20 အဘယ်မှာရှိပညာရှိဖြစ်ကြ၏? အဘယ်မှာရှိကျမ်းပြုဆရာများမှာ? အဘယ်မှာရှိဒီအသက်အရွယ်၏အမှန်တရားရှာဖွေနေသူဖြစ်ကြောင်း? ဘုရားသခင့်ရှေ့၌မိုက်မဲသို့ဤကမ္ဘာ၏ပညာကိုဖန်ဆင်းပေးတော်မမူ?
1:21 ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏မသိခဲ့ပါ, ဆိုတော့, ဘုရားသခင်၏ပညာ၌, ထိုသို့ယုံကြည်သူများ၏ကယ်တင်ခြင်းကိုပြည့်စုံစေခြင်းငှါဘုရားသခငျသညျအလိုရှိ, ငါတို့ဟောပြောခြင်း၏မိုက်မဲခြင်းတဆင့်.
1:22 ယုဒလူတို့အဘို့အနိမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်း, နှင့်ဟေလသလူပညာကိုရှာ.
1:23 ငါတို့မူကားခရစ်တော်၏လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာသတ်သောဟောပြောနေကြတယ်. မုချ, ယုဒလူတို့အား, ဒီအရှုပ်တော်ပုံဖြစ်ပါသည်, နှင့်တပါးအမျိုးသားတို့အဖို့, ဒီမိုက်မဲခြင်းဖြစ်၏.
1:24 ဒါပေမယ့်လို့ချေါခဲ့ကြသောသူတို့အဖို့, ယုဒလူတို့အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ဟေလသလူ, ခရစျတျောသညျဘုရားသခငျ၏သီလနှငျ့ဘုရားသခငျ၏ပညာသည်.
1:25 အဘယျသို့ဘုရားသခင်အားမိုက်မဲခြင်းဖြစ်၏လူပညာရှိသစဉ်းစားသည်, ဘုရားသခငျသညျမှအားနည်းခြင်းအရာသည်လူတို့အားကြီးသောစဉ်းစားသည်.
1:26 ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မှေးလုပျငနျး၏စောင့်ရှောက်မှုယူ, ကိုညီအစျ. များသောဇာတိပကတိအားဖြင့်ပညာရှိသောသူဖြစ်ကြ၏, များသောအစွမ်းထက်မျ​​ားမှာ, များသောအရိယာများမှာ.
1:27 သို့သော်ဘုရားသခငျသညျဤလောကကိုအစိုးရသောမိုက်မဲသောရွေးချယ်ခဲ့သည်, သူပညာရှိတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းငှါဒါ. တဖန်ဘုရားသခင်ကကမ္ဘာ၏အားနည်းရွေးချယ်ခဲ့သည်, သူကခိုင်ရှက်ကြောက်စေခြင်းငှါဒါ.
1:28 တဖန်ဘုရားသခင်က ignoble နှင့်ကမ္ဘာ၏ယုတ်မာသောရွေးချယ်ခဲ့သည်, အဘယ်အရာကိုမျှနေသောသူတို့ကို, သူဘာမှမဖို့တစ်ခုခုနေသောသူတို့ကိုလျော့ချစေခြင်းငှါဒါ.
1:29 သို့ဖြစ်., ရှေ့တော်၌အဝါကြွားစရာသောဘာမျှမ.
1:30 သင်တို့မူကားယေရှုခရစ်၌သူ့ကိုဖြစ်ကြ၏, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာနှင့်တရားမျှတမှုနှင့်သန့်ရှင်းစေခြင်းနှင့်ရွေးနှုတ်ခြင်းဖြစ်ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူ.
1:31 ဆိုတော့, ဒီနည်းအတိုင်းပဲ, ထိုသို့ရေးသားခဲ့: "အကြင်သူသည်ဘုန်းအသရေ, သခင်ဘုရား၌ဘုန်းအသရေဆောင်စေရမည်။ "
1 ကောရိန္သု 2
2:1 ဆိုတော့, ကိုညီအစျ, ငါသည်သင်တို့ရှိရာသို့ရောက်လာသောအခါ, သငျသညျခရစျတျော၏သက်သေခံချက်ကိုကြေညာ, ငါခြီးမွှောကျစကားလုံးမြားသို့မဟုတ်မြတ်သောဉာဏ်ပညာကိုဆောင်ခဲ့ကြဘူး.
2:2 ငါဘယ်အရာကိုမျှသင်တို့ကိုသိရန်ကိုယ့်ကိုကိုယ်မစီရင်ခဲ့သည်ကို, ယရှေုခရ မှလွဲ., သူ့ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထား.
2:3 ထိုအခါငါအားနည်းခြင်းအဖြစ်၌သင်တို့နှင့်အတူရှိခဲ့, နှင့်ကြောက်ရွံ့သေ​​ာသဘောရှိ, အများကြီးတုန်လှုပ်ခြင်းနှင့်.
2:4 ငါ့စကားဟောပြောလူ့ပညာ၏ဖြားယောင်းစကားသည်မဟုတ်ကြ, ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်နှင့်သီလ၏တစ်ဦးတို့အားထင်ရှားစွာခဲ့ကြ,
2:5 သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်လူပညာအပေါ်အခြေပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်အောင်, ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်၏သီလအပေါ်.
2:6 အခုတော့, we do speak wisdom among the perfect, သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, this is not the wisdom of this age, nor that of the leaders of this age, which shall be reduced to nothing.
2:7 အဲဒီအစား, we speak of the wisdom of God inamystery which has been hidden, which God predestined before this age for our glory,
2:10 သို့သော်ဘုရားသခင်သည်မိမိဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ငါတို့အားဤအရာတို့ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်. ဝိညာဉ်တော်သည်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုရှာဘို့, ဘုရားသခင်တည်းဟူသော, နက်နဲသောပင်လယ်.
2:11 အဘယ်သူသည်လူဖြစ်ကြ၏သောအရာတို့ကိုသိနိုငျ, except the spirit which is within that man? ဒါကြောင့်လည်း, no one knows the things which are of God, except the Spirit of God.
1 ကောရိန္သု 3
3:1 ဆိုတော့, ကိုညီအစျ, ငါဝိညာဉ်ရေးရာနေသောသူတို့အားလျှင်သကဲ့သို့သင်တို့အားဟောပြောရသောအမတတျနိုငျ, ဒါပေမယ့်အစားဇာတိပကတိ၌နေသောသူသူတို့အားလျှင်အဖြစ်. သငျသညျခရစျတျောအတွက်မွေးကင်းစကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏များအတွက်.
3:2 ငါသည်သင်တို့ကိုမသောက်ရမှကိုနို့ညှစ်ပေး၏, အစိုင်အခဲမဟုတ်အစာ. သငျသညျသေးမတတျနိုငျခဲ့ကြသည်ကို. ထိုအအမှန်ပင်, အခုတောင်မှ, သငျသညျမတတျနိုငျများမှာ; သင်ဆဲဇာတိပကတိလူဖြစ်ကြသည်.
3:3 ထိုအငြူစူရန်သငျတို့တှငျရှိနေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက, သငျသညျဇာတိပကတိလူမဟုတ်, သငျတို့သညျလူအညီလျှောက်လှမ်းကြသည်မဟုတ်?
3:4 တဦးတည်းကပြောပါတယ်လျှင်, "စင်စစ်, ငါပေါလု၏ဖြစ်ကြောင်းကို,"အခြားပြောပါတယ်စဉ်, "ငါသည် Apollo ၏ဖြစ်ကြောင်းကို,"သင်ယောက်ျားမဟုတ်? ဒါပေမယ့် Apollo ကားအဘယ်သို့, နှင့်ပေါလုကားအဘယ်သို့?
3:5 ငါတို့သည်သူ့ကိုအသာဝန်ကြီးများဖြစ်ကြသင်တို့သည်ယုံကြည်ကြပါပြီဘယ်သူကို, သခင်ဘုရားသည်သင်တို့အသီးအသီးမှခွင့်ပြုထားပြီးကိုယ့်အဖြစ်.
3:6 ငါစိုက်သော, Apollo ရေလောင်း, သို့သော်လည်းဘုရားသခင်သည်ကြီးထွားထောက်ပံ့.
3:7 ဆိုတော့, သူအပင်မဟုတ်, မဟုတ်သူရေလောင်း, ဘာမှဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့သာဘုရားသခငျသညျ, အဘယ်သူတိုးတက်မှုနှုန်းကိုထောက်ပံ့ပေး.
3:8 ယခုသူကိုစိုက်ပျိုးသောသူသည်, သူကသူအရေလောင်း, တဝတည်းဖြစ်ကြ၏. ဒါပေမယ့်အသီးအသီးမိမိအသင့်လျော်အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်, မိမိအ လုပ်. ရသောဥစ္စာအညီ.
3:9 ငါတို့သည်ဘုရားသခင့်လက်ထောက်ဖြစ်ကြ၏. သငျသညျဘုရားသခငျ၏စိုက်ပျိုးမှုများမှာ; သငျသညျဘုရားသခငျ၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများမှာ.
3:10 ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အတိုင်း, ငါ့အားအပ်ပေးတော်မူပြီရာ, ငါပညာရှိတဲ့ဗိသုကာကဲ့သို့အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုချပြီ. သို့သော်အခြားသောသူသည်အပျေါမှာတည်ဆောက်. သို့ဖြစ်., အသီးအသီးကိုသူကအပျေါ၌တည်ဆောက်ပုံကိုသတိထားကြစေ.
3:11 အဘယ်သူမျှမဆိုအခြားအခြေခံအုတ်မြစ်ကို တင်. နိုင်, အလောင်းတော်ထားခဲ့သောအရာ၏အရပျ၌, ခရစ်တော်ယေရှုအရာဖြစ်ပါသည်.
3:12 But if anyone builds upon this foundation, whether gold, silver, အဖိုးတန်ကျောက်များ, wood, hay, or stubble,
3:16 သငျသညျသငျသညျဘုရားသခငျ၏ဗိမာနျတျောဖြစ်ကြောင်းသိမနေပါနဲ့, ဘုရားသခငျ၏ဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အထဲ၌အသက်ရှင်?
3:17 သို့သော်မည်သူမဆိုသညျဘုရားသခငျ၏ဗိမာနျတျောကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်လျှင်, ဘုရားသခငျသညျသူ့ကိုငါဖျက်ဆီးမည်. ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်သည်သန့်ရှင်းရ၏, သင်တို့သည်လည်း, ထိုဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြသည်.
3:18 အဘယ်သူမျှမလှည့်ဖြားကြကုန်အံ့ကိုယ်တော်တိုင်. သငျတို့တှငျမညျသူမဆိုဒီအသက်အရွယ်၌ပညာရှိဖြစ်ဟန် အကယ်., သူ့ကိုမိုက်မဲဖြစ်လာပါစေ, သူသညျအမှနျတကယျပညာရှိဖြစ်စေခြင်းငှါဒါ.
3:19 ဤလောကကိုအစိုးရသောပညာသည်ဘုရားသခင်နှင့်အတူမိုက်မဲခြင်းဖြစ်၏. ဒါကြောင့်စာဖြင့်ရေးသားခဲ့: "ငါသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လာဘ်မြင်သောပညာရှိဖမ်းပါလိမ့်မယ်။ "
3:20 တဖန်တုံ: "ဒီသခင်ပညာရှိတို့၏အကြံအစည်သိတယ်, သူတို့အချည်းနှီးဖြစ်ကြောင်းကို။ "
3:21 ဆိုတော့, လူအဘယ်သူမျှမဝါကြွားစေ.
3:22 လူအပေါင်းတို့သည်သင်တို့အဘို့ဖြစ်ပါသည်: ပေါလုသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ် Apollo, သို့မဟုတ်ကဖေ, ဒါမှမဟုတ်ကမ္ဘာ, သို့မဟုတ်ဘဝ, သို့မဟုတ်သေဆုံး, သို့မဟုတ်ပစ္စုပ္ပန်, ဒါမှမဟုတ်အနာဂတ်. ဟုတ်ကဲ့, အားလုံးဥစ္စာ.
3:23 သို့သော်သင်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကို, ခရစ်တော်သည်လည်းဘုရားသခင်အဘို့ဖြစ်.
1 ကောရိန္သု 4
4:1 လျြောညီစှာ, လူသည်ငါတို့ကိုခရစ်တော်နှင့်ဘုရားသခင်၏နက်နဲသောအရာတို့ကိုအမှုထမ်းများ၏ဝန်ကြီးများဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြကုန်အံ့.
4:2 ဤတွင်နှင့်ယခု, ဒါကြောင့်အသီးအသီးသစ္စာရှိသောသူဖြစ်တွေ့စေခြင်းအမှုထမ်းများ၏လိုအပ်ပါသည်.
4:3 အကြှနျုပျမူကားအဖြစ်, သင်တို့ကိုစီရင်ခံရဖို့ထိုကဲ့သို့သောသေးငယ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်, သို့မဟုတ်လူသားထု၏အသက်အားဖြင့်. မငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်တရားစီရင်တော်မူကြပါ.
4:4 ငါသည်ငါ၏သြတ္တပ္ပစိတ်အပေါ်ဘာမျှမရှိသည်. ဒါပေမဲ့ကျွန်မဒီနေဖြင့်တရားမျှတမဖြစ်ကြောင်းကို. သခင်ဘုရားအဘို့အကြှနျုပျကိုစီရင်သောသူတည်း.
4:5 ဆိုတော့, အချိန်ကိုရှေ့တော်၌တရားစီရင်တော်မူရန်ရွေးချယ်ကြပါဘူး, သခင်ဘုရားကိုပြန်မှီတိုင်အောင်,. သူသည်မှောင်မိုက်၌ဝှက်ထားလျက်ရှိသောအရာတို့ကိုထွန်းလင်းတောက်ပစေပါလိမ့်မယ်, သူကစိတျနှလုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုထင်ရှားစွာပြစေမည်. ပြီးတော့အသီးအသီးဘုရားသခင်ထံမှချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရကြလတံ့.
4:6 ဆိုတော့, ကိုညီအစျ, ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်နှင့် Apollo တွင်ဤအမှုအရာပေးအပ်ခဲ့ကြ, သင်တို့ကို ထောက်., သငျသညျသငျယူစေခြင်းငှါဒါ, ငါတို့အားဖြင့်, အဘယ်သူမျှမတဦးတည်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်အခြားအဘို့အဖောင်းသင့်ကြောင်း, မကျမ်းစာ၌ရေးထားပြီအဘယျသို့ကျော်လွန်.
4:7 အခြားထံမှသင်တို့ခွဲခြားဘယ်သို့သောအကြောင်းအရာ? ထိုအသင်လက်ခံရရှိပြီမဟုတ်ကြောင်းအဘယျသို့ရှိဘူး? သင်တို့မူကားထိုသို့ခံပြီလျှင်, သငျသညျဘုနျးတျောကိုလုပျအဘယ်ကြောင့်, သငျသညျမခံမခဲ့လျှင်အဖြစ်?
4:8 ဒါကြောင့်, ယခုသငျသညျပွညျ့စုံပြီ, အခုဆိုရင်သင်ချမ်းသာကြွယ်ဝကြပြီ, ငါတို့မရှိစိုးစံမှလျှင်အဖြစ်? သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့ကိုစိုးစံမယ်လို့ဆန္ဒရှိ, ကျနော်တို့ကဒါ, လွန်း, သင်တို့နှင့်အတူစိုးစံစေခြင်းငှါ,!
4:9 ငါသည်ဘုရားသခင်ကနောက်ဆုံးတမန်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးအပ်ပြီထင်များအတွက်, အသေခံဘို့အလတ်သူတို့အားအဖြစ်. ငါတို့သည်ဤလောကအဘို့အမျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောသို့ကြပြီများအတွက်, နှင့်ကောင်းကင်တမန်အဘို့, နှင့်လူတို့သညျအဘို့.
4:10 ဒါကွောငျ့ခရစ်တော်၏လူမိုက်ဖြစ်ကြ၏, သင်မူကားခရစ်တော်အတွက်ပိုင်းခြားထားပါသည်? ငါတို့သည်အား နည်း., သင်မူကားခွန်အားဖြစ်ကြ၏? သငျသညျအရိယာများမှာ, ငါတို့မူကား ignoble များမှာ?
4:11 တောင်မှဒီအလွန်နာရီမှ, ကျွန်တော်တို့ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်း, ရေငတ်, ကျွန်တော်အဝတ်အချည်းစည်းနှင့်အကြိမ်ကြိမ်ရိုက်နှက်, ကျွန်တော် unsteady များမှာ.
4:12 အကြှနျုပျတို့လုပ်အား, ကိုယ်လက်အတူလုပ်ကိုင်. ကျနော်တို့ကုန်းတိုက်နေကြတယ်, ဒါမေတ္တာပို့. ကျနော်တို့ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရသောအခါသည်းခံနှင့်.
4:13 ကျနော်တို့ကိုကျိန်ဆဲနေကြ, ဒါကြှနျုပျတို့ဆုတောငျး. ငါတို့သည်ဤကမ္ဘာ၏မစင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြပြီ, အရာအားလုံး၏နေအိမ်သို့တူ, ယခုတိုင်အောင်.
4:14 ငါသည်သင်တို့ရှက်ကြောက်စေနိုင်ရန်အတွက်ဤအရာတို့ကိုငါရေးသည်မဟုတ်, သင်မူကား, သတိပေးကြလော့နိုင်ရန်အတွက်, ငါ့အခစျြဆုံးသားကဲ့သို့.
4:15 သငျသညျခရစျတျောတသောင်းသင်တန်းပို့ချစေခြင်းငှါအဘို့, ဒါပေမဲ့မဤမျှလောက်များစွာသောသည်ဘိုးဘေးတို့. ယေရှုခရစ်၌များအတွက်, ဧဝံဂေလိတရားကိုတဆင့်, ငါသည်သင်တို့ကိုဖြစ်ဘွားစေပြီ.
4:16 ထို့ကြောင့်, တောင်းပန်ပါတယ်, be imitators of me, just as I am of Christ.
4:17 ဒီအတွက်ကြောင့်, I have sent you Timothy, who is my dearest son, and who is faithful in the Lord. He will remind you of my ways, which are in Christ Jesus, just as I teach everywhere, in every church.
1 ကောရိန္သု 5
5:1 တခြားအရာအားလုံးထက်အထက်, ကမတရားသောမေထုန်ကိုသငျတို့တှငျရှိကွောငျးဆိုပါတယ်နေပါသည်, တပါးအမျိုးသားတို့ကိုမသောထိုကဲ့သို့သောမျိုးပင်မတရားသောမေထုန်ကို, ဒါကြောင့်တစ်စုံတစ်ဦးကမိမိအဘ၏မယားရှိလိမ့်မယ်လို့.
5:2 သို့သော်လည်းသင်သည်ဖောင်းနေကြသည်, သငျတို့သအစားစိတျမဖြစ်ကြပြီမဟုတ်, ဤအမှုကိုပြုတော်မူပြီသောသူမူကားပျောက်သင့်အလယ်ကနေခေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသို့မှသာ.
5:3 မုချ, ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပျက်ကွက်သော်လည်း, ငါ၌စိတ်ဝိညာဉ်အားပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြောင်းကို. ထို့ကြောင့်, ငါပြီးသားတရားသဖြင့်စီရင်ကြပါပြီ, ငါပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်လျှင်အဖြစ်, သူ့ကိုသူကိုဤအမှုကိုစီရင်.
5:4 ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏နာမ၌, သငျသညျအကြှနျုပျ၏ဝိညာဉျကိုအတူစုဝေးစေကြပြီ, ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏တန်ခိုးတော်ကိုပြခြင်း,
5:5 စာတန်ကဤကဲ့သို့သောတစ်လွှဲပြောင်းပေးရန်, ဇာတိပကတိ၏ပျက်စီးခြင်းအဘို့, ဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏နေ့ရက်ကာလ၌ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းဒါ.
5:6 ဒါဟာဘုန်းအသရေမှသင်တို့အဘို့ကောင်းသောမဟုတ်ပါဘူး. သငျသညျအနညျးငယျတဆေးတစ်ခုလုံးကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ယိုယွင်းမသိကြ?
5:7 အဟောင်းတဆေးကိုသုတ်သင်ပယ်ရှင်း, သငျသညျသစ်ကိုမုန့်ဖြစ်စေခြင်းအလိုငှါဒါ, သငျသညျတဆေးမဲ့နေကြသည်များအတွက်. ခရစ်တော်သည်, ကျွန်ုပ်တို့၏ပသခါပွဲ, ယခု immolated ထားပြီး.
5:8 ဆိုတော့, ကျွန်တော်တို့ကိုစားသောက်ကြကုန်အံ့, မဟောင်းသောတဆေးနှင့်အတူ, မဟုတ်ငြိုးနဲ့ဆိုးသှမျးတဆေးနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်ရိုးသားမှုနှင့်အမှန်တရား၏တဆေးမပါသောမုန့်နှင့်.
5:10 certainly not with the fornicators of this world, nor with the greedy, nor with robbers, nor with the servants of idolatry. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, you ought to depart from this world.
5:11 But now I have written to you: do not associate with anyone who is calledabrother and yet isafornicator, or greedy, oraservant of idolatry, တစ်ခုသို့မဟုတ်ကဲ့ရဲ့တတျသောသူ, or inebriated, orarobber. With suchaone as this, do not even take food.
1 ကောရိန္သု 6
6:2 Or do you not know that the saints from this age shall judge it? And if the world is to be judged by you, are you unworthy, ထို့နောက်, to judge even the smallest matters?
6:4 ထို့ကြောင့်, if you have matters to judge concerning this age, why not appoint those who are most contemptible in the Church to judge these things!
6:6 အဲဒီအစား, brother contends against brother in court, and this before the unfaithful!
6:12 အားလုံးငါ့ကိုအပ်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်အားလုံးမည်မျှပင်မ. အားလုံးငါ့ကိုအပ်ဖြစ်ပါသည်, but I will not be driven back by the authority of anyone.
6:14 အမှန်ဆိုသည်ကား,, God has raised up the Lord, and he will raise us up by his power.
6:15 Do you not know that your bodies areapart of Christ? သို့ဖြစ်., should I takeapart of Christ and make itapart ofaharlot? Let it not be so!
6:16 And do you not know that whoever is joined toaharlot becomes one body? “For the two,"ဟုသူကဆိုသည်, “shall be as one flesh.”
1 ကောရိန္သု 7
7:2 ဒါပေမယ့်, because of fornication, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband.
7:4 It is not the wife, but the husband, who has power over her body. ဒါပေမယ့်, similarly also, it is not the husband, but the wife, who has power over his body.
7:5 ဒါကြောင့်, do not fail in your obligations to one another, except perhaps by consent, foralimited time, so that you may empty yourselves for prayer. ပြီးနောက်, return together again, lest Satan tempt you by means of your abstinence.
7:12 ကြွင်းသောအရာမြားနှငျ့ ပတျသကျ., I am speaking, not the Lord. If any brother has an unbelieving wife, and she consents to live with him, he should not divorce her.
7:14 For the unbelieving husband has been sanctified through the believing wife, and the unbelieving wife has been sanctified through the believing husband. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, your children would be unclean, whereas instead they are holy.
7:17 သို့သော်, let each one walk just as the Lord has distributed to him, each one just as God has called him. And thus do I teach in all the churches.
7:22 For any servant who has been called in the Lord is free in the Lord. အလားတူပင်, any free person who has been called isaservant in Christ.
7:24 ညီအစျကို, let each one, in whatever state he was called, remain in that state with God.
7:25 အခုတော့, concerning virgins, I have no commandment from the Lord. But I give counsel, as one who has obtained the mercy of the Lord, so as to be faithful.
7:26 ထို့ကြောင့်, I consider this to be good, because of the present necessity: that it is good foraman to be such as I am.
7:28 But if you takeawife, you have not sinned. And ifavirgin has married, she has not sinned. သော်ငြားလည်း, such as these will have the tribulation of the flesh. But I would spare you from this.
7:29 ဆိုတော့, this is what I say, ကိုညီအစျ: The time is short. What remains of it is such that: those who have wives should be as if they had none;
7:33 But whoever is withawife is worried about the things of the world, as to how he may please his wife. ဆိုတော့, he is divided.
7:35 ထို့အပွငျ, I am saying this for your own benefit, not in order to castasnare over you, but toward whatever is honest and whatever may provide you with the ability to be without hindrance, so as to worship the Lord.
7:38 ဆိုတော့, he who joins with his virgin in matrimony does well, and he who does not join with her does better.
7:40 But she will be more blessed, if she remains in this state, in accord with my counsel. And I think that I, လွန်း, have the Spirit of God.
1 ကောရိန္သု 8
8:7 But knowledge is not in everyone. For some persons, အခုတောင်မှ, with consent to an idol, eat what has been sacrificed to an idol. And their conscience, being infirm, becomes polluted.
8:13 ဒီအတွက်ကြောင့်, if food leads my brother to sin, I will never eat meat, lest I lead my brother to sin.
1 ကောရိန္သု 9
9:10 Or is he saying this, တကယ်ပါပဲ, for our sake? These things were written specifically for us, because he who plows, ought to plow in hope, and he who threshes, လွန်း, in hope of receiving the produce.
9:12 If others are sharers in this authority over you, why are we not more entitled? And yet we have not used this authority. အဲဒီအစား, we bear all things, lest we give any hindrance to the Gospel of Christ.
9:14 ဒါကြောင့်, လွန်း, has the Lord ordained that those who announce the Gospel should live by the Gospel.
9:16 ငါဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောလျှင်အဘို့, ဒါကြောင့်ငါ့အဘို့ဘုန်းအသရေသည်မဟုတ်. တစ်ဦးတာဝန်သည်အကြှနျုပျအပျေါ၌ထားလေ၏ခဲ့. ထိုအမင်္ဂလာရှိ၏ငါ့အား, ငါဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပွောကွမကျဘူးဆိုလျှင်.
9:17 ငါလိုလိုလားလားဤသို့ပြုလျှင်, ငါသည်တအကျိုးကိုခံရ. သို့သော်လည်းငါသည်တုံ့ဤသို့ပြုလျှင်, တစ်ဦးစပ်ဆိုင်သောသာသနာသည်ငါ့ဆီသို့ရောက်ရသောအခွင့်သည်.
9:18 ပြီးတော့ဘာလဲ, ထို့နောက်, ငါ၏အကျိုးအပါလိမ့်မယ်? ဒါကြောင့်, ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပွောရသည့်အခါ, ငါယူပြီးမပါဘဲဧဝံဂေလိတရားကိုပေးသင့်တယ်, ငါဝငျကမျြး၌ငါ၏အခွင့်အာဏာကိုအလွဲသုံးစားမပြုစေခြင်းငှါဒါ.
9:19 ငါသည်ခပ်သိမ်းသောရန်အခမဲ့သူဖြစ်၏သောအခါ, ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အပေါင်းတို့၏ကျွန်လုပ်, တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါ သာ. များသောသူတို့ကိုရခြင်းအလိုငှါဒါ.
9:20 ဆိုတော့, ယုဒလူတို့အား, I became likeaJew, so that I might gain the Jews.
9:22 အားနည်းစေရန်, ငါအားနည်းနေဖြစ်လာခဲ့သည်, ငါအားနည်းရခြင်းအလိုငှါဒါ. အားလုံးကို, ငါသည်ခပ်သိမ်းသောဖြစ်လာခဲ့သည်, ငါသည်ခပ်သိမ်းသောကိုကယ်တင်အံ့သောငှါဒါ.
9:23 ထိုနောက်မှငါသည်ဧဝံဂေလိတရားကို ထောက်. ခပ်သိမ်းသောအရာပြုပါ, ငါက၎င်း၏မိတ်ဖက်ဖြစ်လာစေခြင်းငှါဒါ.
9:24 သငျသညျကိုမသိကြ, တစ်ဦးအပြေးပြိုင်ပွဲအတွက်ပြေးသောသူတို့၏အမျိုးအ, သူတို့အားလုံး, မုချ, အပြေးသမားများမှာ, ဒါပေမဲ့တစ်ဦးတည်းသာဆုကိုရရှိ. အလားတူပင်, သငျသညျကို run ရမယ်, သင်အောင်မြင်စေခြင်းငှါဒါ.
9:25 ထိုအခါပြိုင်ပွဲအတွက်ယှဉ်ပြိုင်သူတစ်ဦးခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမှရှောင်ကြဉ်. ထိုသူတို့ကဤအမှုကို, ဒါပေါ့, သူတို့တစ်တွေပျက်စီးတတ်သောပန်းဦးရစ်သရဖူကိုအောင်မြင်ရန်စေခြင်းငှါဒါ. ငါတို့မူကားဤအမှုကို, ကျွန်တော်တို့မပျက်စီးနိုင်သောအရာကိုအောင်မြင်ရန်စေခြင်းငှါဒါ.
9:26 ဒါကြောင့်လဲကျနော်ကို run, ဒါပေမဲ့မမသေချာမရေရာနှင့်အတူ. ဒါကြောင့်လဲကျနော်ကိုစစ်တိုက်ခြင်း, ဒါပေမဲ့မလေထဲတွင် flailing အားဖြင့်.
9:27 အဲဒီအစား, ငါ့ကိုယ်ငါဆုံးမ, ကျွန်သို့ redirect မှသကဲ့သို့. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, ငါသည်အခြားသောသူတို့အားဟောပြောစေခြင်းငှါ,, ဒါပေမယ့်အပယ်ခံကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြစ်လာ.
1 ကောရိန္သု 10
10:1 For I do not want you to be ignorant, ကိုညီအစျ, that our fathers were all under the cloud, and they all went across the sea.
10:4 And they all drank of the same spiritual drink. ဆိုတော့, they all were drinking of the spiritual rock seeking to obtain them; and that rock was Christ.
10:7 ဆိုတော့, do not take part in idolatry, as some of them did, ဒါကြောင့်ရေးသားခဲ့သကဲ့သို့: “The people sat down to eat and to drink, and then they rose up to amuse themselves.”
10:12 ဆိုတော့, whosoever considers himself to be standing, let him be careful not to fall.
10:13 Temptation should not take hold of you, except what is human. For God is faithful, and he will not permit you to be tempted beyond your ability. အဲဒီအစား, he will effect his Providence, even during temptation, so that you may be able to bear it.
10:14 ဒီအတွက်ကြောင့်, သတ္တုတွင်းအများစုချစ်သူတို့, ရုပ်တုများကိုးကွယ်မှုထံမှပြေး.
10:15 ငါသမ္မာသတိရှိသောသူစကားပြောငါကတည်းက, ကျွန်မကိုယ်အဘို့အဘယ်သို့ပြောသည်ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူ.
10:16 ငါတို့သည်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြောင်း Benedict ၏ခွက်ကို, ကခရစ်တော်၏သွေးထဲမှာဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်? ငါတို့သည်ဖဲ့သောမုန့်, ဒါကြောင့်သခင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပါဝင်မှုမဟုတ်ပါဘူး?
10:17 တပေါင်မုန့်ကတဆင့်, ကျွန်တော်တို့, အများအပြားသော်လည်း, တကိုယ်တည်းဖြစ်ကြ၏: တပေါင်မုန့်ကိုဆက်ဆံနေသောကြှနျုပျတို့အားလုံး.
10:18 ဣသရေလအမျိုးကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ, ဇာတိပကတိအားဖြင့်. ယဇ်ပလ္လင်၏ယဇျပူဇျောဆက်ဆံရာမှအစာစားသောသူတို့၌ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်?
10:19 လာမယ့်ဆိုတာဘာလဲ? အဘယ်သို့ငါရုပ်တု immolated ဖြစ်ပါတယ်ဘာမှကြောင်းပြောသင့်? ဒါမှမဟုတ်ရုပ်တုဘာမှကြောင်း?
10:20 သို့သော်အမှုအရာကိုတပါးအမျိုးသားတို့ immolate ကြောင်း, သူတို့နတ်ဆိုးများမှ immolate, ဘုရားမမှ. ထိုအခါငါသင်တို့သည်နတ်ဆိုးတို့နှင့်ဆက်ဆံဖြစ်လာချင်ကြပါဘူး.
10:21 သင်သည်ထာဝရဘုရား၏ခွက်ကိုမသောက်နိုင်ကြ, နတ်ဆိုးတို့၏နဲ့ခွက်ကို. သင်သည်ထာဝရဘုရား၏စားပွဲနှစ်ပါးကိုသင်တို့ ဝင်. မဖွစျနိုငျ, နတ်ဆိုးတို့၏စားပွဲနှစ်ပါးကိုသင်တို့ ဝင်..
10:22 ဒါမှမဟုတ်ကျနော်တို့ငြူစူသောစိတ်အကြောင်း, သခင်နှိုးဆော်ခြင်းသင့်တယ်? ကျွန်တော်သူသည်အထက် သာ. တန်ခိုးကြီးကြ? အားလုံးငါ့ကိုအပ်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်အားလုံးမည်မျှပင်မ.
10:23 အားလုံးငါ့ကိုအပ်ဖြစ်ပါသည်, but not all is edifying.
10:31 ထို့ကြောင့်, whether you eat or drink, or whatever else you may do, do everything for the glory of God.
10:33 just as I also, ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုထဲမှာ, please everyone, not seeking what is best for myself, but what is best for many others, so that they may be saved.
1 ကောရိန္သု 11
11:1 ငါ့ကိုနည်းတူကျင့် Be, as I also am of Christ.
11:2 Now I praise you, ကိုညီအစျ, because you are mindful of me in everything, in suchaway as to hold to my precepts as I have handed them down to you.
11:3 So I want you to know that the head of every man is Christ. But the head of woman is man. သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, the head of Christ is God.
11:7 မုချ,aman ought not to cover his head, for he is the image and glory of God. But woman is the glory of man.
11:9 ထိုအအမှန်ပင်, man was not created for woman, but woman was created for man.
11:10 ထို့ကြောင့်,awoman ought to haveasign of authority on her head, because of the Angels.
11:11 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, man would not exist without woman, nor would woman exist without man, သခင်ဘုရား၌.
11:14 Does not even nature herself teach you that, တကယ်ပါပဲ, ifaman grows his hair long, it isadisgrace for him?
11:15 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, ifawoman grows her hair long, it isaglory for her, because her hair has been given to her asacovering.
11:17 အခုဆိုရင်သင်တို့ကိုငါသတိထား, ခြီးမှမျးခွငျးမရှိဘဲ, ဒီအကြောင်း: သငျသညျအတူတကွစုဝေးကြောင်း, မဟုတျဘဲပိုကောင်းတဲ့အတှကျ, ဒါပေမယ့်ပိုဆိုးဘို့.
11:18 ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, တကယ်ပါပဲ, ငါသည်သင်တို့ကိုအသင်းတော်၌အတူတကွစုဝေးလာသောအခါကြား, သငျတို့တှငျ schisms ရှိပါတယ်. ငါသည်ဤယုံကြည်, အစိတ်အပိုင်းအတွက်.
11:19 ထို့အပြင်အမှန်ဆိုရလျှင်ရှိရမည်မှုအတွက်, စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုသငျတို့တှငျထင်ရှားစေခြင်းအလိုငှါဒါ.
11:20 ဆိုတော့, သင်တဦးတည်းအဖြစ်အတူတကွစုဝေးကြသောအခါ, ဒါကြောင့်သခင်ဘုရား၏ညစာစားရန်အလို့ငှာမရှိတော့ဖြစ်ပါသည်.
11:21 အသီးအသီးပထမဦးဆုံးစားရန်သူ၏ကိုယ်ပိုင်ညစာစားကြာများအတွက်. ထိုအခါရလဒ်အဖြစ်, လူတစ်ဦးသည်မွတ်သိပ်, အခြား inebriated နေစဉ်.
11:22 သငျသညျအိမ်များရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, စားသောက်ရသော? သို့မဟုတ်သင်ထိုကဲ့သို့သောမထီမဲ့မြင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောသူတို့ကိုရှက်ကြောက်စေမယ်လို့ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်အဘို့အထိုကဲ့သို့သောမထီမဲ့မြင်မ? ငါသည်သင်တို့အားအဘယ်သို့ပြောသင့်တယ်? ငါသည်သင်တို့ကိုချီးမွမ်းသင့်ပါတယ်? ငါသည်ဤ၌သငျခြီးမှမျးမဟုတ်.
11:23 ငါသည်လည်းသင်တို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏အရာကိုသခင်ဘုရားထံ၌ခံပြီ: သခငျယရှေုကြောင်း, သူကလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့တူညီတဲ့ညဉ့်တွင်, ပေါင်မုန့်ကိုယူ,
11:24 ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပေးခြင်း, သူကဖဲ့, ဟု: "ကိုယူစား. ဤသူကားငါ၏ကိုယ်ဖြစ်၏, သင်တို့အဘို့အတက်ပေးကြလိမ့်မည်သည့်. ငါ့ကိုအောက်မေ့၌ဤလုပ်ပါ။ "
11:25 အလားတူပင်လည်း, ခွက်, သူကညစာစားကိုစားပြီးမှ, ဟုဆို: "ဤခွက်ကားငါ၏အသွေး၌အသစ်သောပဋိညာဉ်ဖြစ်. ဤသို့ပြု, အဖြစ်မကြာခဏသင်ကမသောက်ရအဖြစ်, ငါ့ကိုအောက်မေ့။ "
11:26 သင်ဤမုန့်ကို စား. ထိုခွက်ကိုသောက်သည့်အခါတိုင်းအဘို့, သင်တို့သည်သခင်ဘုရားအသေခံကြွေးကြော်, သူပြန်လာချိန်အထိ.
11:27 ဆိုတော့, whoever eats this bread, or drinks from the cup of the Lord, unworthily, shall be liable of the body and blood of the Lord.
11:28 But letaman examine himself, နှင့်, ဒီလိုမျိုး, let him eat from that bread, and drink from that cup.
11:30 ရလဒ်အနေဖြင့်, many are weak and sick among you, and many have fallen asleep.
11:33 ဆိုတော့, ငါ့ညီအစ်ကိုတို့, သငျသညျစားရန်ကိုအတူတကွစုဝေးကြသောအခါ, အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ရန်စေ့စေ့နားထောင်ဖြစ်.
1 ကောရိန္သု 12
12:1 Now concerning spiritual things, I do not want you to be ignorant, ကိုညီအစျ.
12:3 ဒီအတွက်ကြောင့်, ငါသည်သင်တို့ကိုဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်၌စကားပြောအဘယ်သူမျှမယရှေုကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့ကျိန်စာလွှတ်တော်သင်သိရရှိသည်မယ်လို့. အဘယ်သူမျှမယရှေုသညျမိနျ့တျောမူ၏ဟုနိုင်, သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်အတွက် မှလွဲ..
12:4 အမှန်ဆိုသည်ကား,, မတူကွဲပြားသောကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းရှိပါတယ်, သော်လည်းဝိညာဉ်တော်တပါးတည်း.
12:5 နှင့်ကွဲပြားခြားနားဝန်ကြီးဌာနများရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သခင်တပါးတည်း.
12:6 နှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်အကျင့်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်တူညီသညျဘုရားသခငျ, အဘယ်သူသည်လူတိုင်းအတွက်အရာအားလုံးအလုပ်လုပ်တယ်.
12:7 သို့သော်, ဝိညာဉ်တော်သည်တို့၏ပေါ်ထွန်းခြင်းအကျိုးရှိသောသည်အဘယ်အရာဆီသို့အသီးအသီးအားပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်.
12:8 မုချ, to one, through the Spirit, is given words of wisdom; but to another, according to the same Spirit, words of knowledge;
12:9 to another, in the same Spirit, ယုံကြည်ခြင်းအား; to another, တဝိညာဉ်တော်၌, the gift of healing;
12:12 ကိုယ်တခုတည်းဖြစ်သကဲ့သို့များအတွက်, သို့သော်လည်းဒေသအများအပြားရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါအပေါင်းတို့သည်, သူတို့အများဖြစ်ကြ၏သော်လည်း, တစ်ဦးတည်းသာကိုယ်ဖြစ်ကြ၏. ထိုနည်းတူခရစ်တော်ဖြစ်၏.
12:13 ထိုအအမှန်ပင်, စိတ်တဝိညာဉ်တည်းအတွက်, ငါတို့ရှိသမျှသည်တကိုယ်တည်းထဲသို့ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ရသည်, ယုဒလူတို့သို့မဟုတ်တပါးအမျိုးသားတို့သည်ရှိမရှိ, ကျွန်သည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်အခမဲ့. ထိုအကြှနျုပျတို့ရှိသမြှတဝိညာဉ်တော်၌လည်းသောက်.
12:14 ကိုယ်ခန္ဓာအဘို့, လွန်း, အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်လူအများ.
12:18 သို့သော်မယ့်အစား, God has placed the parts, each one of them, in the body, just as it has pleased him.
12:20 သို့သော်မယ့်အစား, there are many parts, တကယ်ပါပဲ, yet one body.
12:22 တကယ်တော့, so much more necessary are those parts of the body which seem to be weaker.
12:23 And though we consider certain parts of the body to be less noble, we surround these with more abundant dignity, ဆိုတော့, those parts which are less presentable end up with more abundant respect.
12:24 သို့သော်, our presentable parts have no such need, since God has tempered the body together, distributing the more abundant honor to that which has the need,
12:26 ဆိုတော့, if one part suffers anything, all the parts suffer with it. သို့မဟုတ်, if one part finds glory, all the parts rejoice with it.
12:27 ယခုတွင်သင်သည်ခရစ်တော်၏ကိုယ်ဖြစ်ကြ၏, နှင့်မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့အစိတ်အပိုင်းများ.
12:28 ထိုအအမှန်ပင်, ဘုရားသခငျသညျအသင်းတော်၌တယောအမိန့်ကိုထူထေ​​ာင်ခဲ့သည်: ပထမဦးဆုံးတမန်တော်, ဒုတိယအနာဂတ္တိကျမ်း, တတိယဆရာများ, လာမည့်အံ့ဖွယ်-လုပ်သားများ, အနာရောဂါငြိမ်းစရာတို့နှင့်ထို့နောက်ကျေးဇူးတရား, အခြားသူများကိုကူညီခြင်း၏, အုပျခြုပျရေး၏, ဘာသာစကားအမျိုးမျိုး၏, နှင့်စကားများအနက်.
12:29 အားလုံးတမန်တော်ဖြစ်ကြသ? အားလုံးအနာဂတ္တိကျမ်း Are? အားလုံးဆရာများဖြစ်ကြသည်?
12:30 အံ့ဖွယ်အပေါငျးတို့သလုပ်သားများဖြစ်ကြသည်? အားလုံးအနာရောဂါငြိမ်းစရာ၏ကျေးဇူးတော်ရှိပါသလား? အားလုံးဘာသာစကားကိုပြောနိုင်ကြ? အားလုံးအနက်ကိုဘော်ပြပါနဲ့?
12:31 ဒါပေမဲ့ပိုကောင်း charisms အဘို့စိတ်အားထက်သန်ဖြစ်. ထိုအခါငါသည်သင်တို့အားတစ် သာ. မြတ်သောလမ်းကိုထုတ်ဖေါ်.
1 ကောရိန္သု 13
13:13 But for now, these three continue: ယုံကြည်ခြင်းအား, မျှော်လင့်ချက်, and charity. And the greatest of these is charity.
1 ကောရိန္သု 14
14:6 ယခုမူကား, ကိုညီအစျ, if I were to come to you speaking in tongues, how would it benefit you, unless instead I speak to you in revelation, or in knowledge, or in prophecy, or in doctrine?
14:8 ဥပမာအားဖြင့်, if the trumpet made an uncertain sound, who would prepare himself for battle?
14:11 ထို့ကြောင့်, if I do not understand the nature of the voice, then I shall be likeaforeigner to the one with whom I am speaking; and he who is speaking will be likeaforeigner to me.
14:13 ဒီအတွက်ကြောင့်, လွန်း, whoever speaks in tongues, let him pray for the interpretation.
14:14 ဒါကြောင့်, if I pray in tongues, my spirit prays, but my mind is without fruit.
14:15 လာမယ့်ဆိုတာဘာလဲ? I should pray with the spirit, and also pray with the mind. I should sing psalms with the spirit, and also recite psalms with the mind.
14:16 ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, if you have blessed only with the spirit, how can someone, inastate of ignorance, add an “Amen” to your blessing? For he does not know what you are saying.
14:17 ဒီကိစ္စမှာ, မုချ, you give thanks well, but the other person is not edified.
14:20 ညီအစျကို, do not choose to have the minds of children. အဲဒီအစား, be free of malice like infants, but be mature in your minds.
14:21 It is written in the law: “I will speak to this people with other tongues and other lips, and even so, they will not heed me, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။ "
14:22 ဆိုတော့, tongues areasign, not for believers, but for unbelievers; and prophecies are not for unbelievers, but for believers.
14:25 The secrets of his heart are then made manifest. ဆိုတော့, falling to his face, he would adore God, proclaiming that God is truly among you.
14:26 လာမယ့်ဆိုတာဘာလဲ, ကိုညီအစျ? When you gather together, each one of you may haveapsalm, oradoctrine, orarevelation, oralanguage, or an interpretation, but let everything be done for edification.
14:34 Women should be silent in the churches. For it is not permitted for them to speak; ဒါပေမဲ့မယ့်အစား, they should be subordinate, as the law also says.
14:36 ဒါကြောင့်ယခု, did the Word of God proceed from you? Or was it sent to you alone?
14:39 ဆိုတော့, ကိုညီအစျ, be zealous to prophesy, and do not prohibit speaking in tongues.
1 ကောရိန္သု 15
15:1 ဒါကြောင့်လဲကျနော်သင်တို့အားဘော်ပြ, ကိုညီအစျ, ငါအမှနျတရားကိုဟောပြောသောဧဝံဂေလိတရားကို, အရာသင်သည်လည်းလက်ခံရရှိ, နှင့်အရာပေါ်တွင်သင်မတ်တပ်ရပ်.
15:2 ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့်, လွန်း, သငျသညျကယျတငျခွငျးသို့ရောလျက်ရှိသည်, သင်တို့သည်ငါဟောပြောသောဥာဏ်ကိုစွဲလမ်းလျှင်, သငျသညျအခညျြးနှီးယုံကြည် စိုးရိမ်..
15:3 ငါသည်သင်တို့ဆီသို့အပေါ်ပေးအပ်, ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့, အဘယ်အရာကိုငါသညျလညျးကိုလက်ခံရရှိ: ခရစ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက်အသေခံ, ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း;
15:4 သင်္ဂြိုဟ်ပြီးမှကြောင်း; သူသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်ကြောင်း, ကျမ်းစာလာသည်အတိုင်း;
15:5 သူကဖေမြင်ခဲ့, ထိုနောကျမှတကျိပ်တပါးသောအားဖြင့်.
15:6 Next ကိုသူတဦးတည်းအချိန်ကထက်ပိုမိုညီအစ်ကိုငါးရာမြင်ခဲ့သည်, အဘယ်သူကိုအများအပြားရှိနေဆဲ, ပင်ပစ္စုပ္ပန်အချိန်, အချို့သောအိပ်ပျော်ပေမယ့်.
15:7 နောက်တစ်ခု, သူယာကုပ်မြင်ခဲ့သည်, ထို့နောက်အားလုံးတမန်တော်များက.
15:8 ထိုလူအပေါင်းတို့၏နောက်ဆုံး, သူကငါ့ကိုအမှီကိုလည်းမြင်ရ၏, ငါမှားအချိန်တွင်တစ်စုံတစ်ဦးကိုမွေးဖွားခဲ့လျှင်အဖြစ်.
15:10 ဒါပေမယ့်, ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်, I am what I am. And his grace in me has not been empty, since I have labored more abundantly than all of them. Yet it is not I, but the grace of God within me.
15:12 အခုတော့ခရစျတျောတရားကိုဟောလျှင်, သူသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်ကြောင်း, ဒါကြောင့်သင်တို့တွင်အချို့သောသူတို့သည်သေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိဟုကြောင်းဆိုပုံ?
15:13 သေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိဟုလျှင်, ထို့နောက်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မမူ.
15:14 ထိုအခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မမူလျှင်, ထို့နောက်ငါတို့ဟောပြောအသုံးဖြစ်ပါသည်, သင်တို့ယုံကြည်ခြင်းလည်းအသုံးဖြစ်ပါသည်.
15:15 ထိုအခါ, လွန်း, ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏အမှုမှာမမှန်သောသက်သေခံဖြစ်တွေ့ရှိလိမ့်မည်ဟု, ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ဆန့်ကျင်သက်သေခံချက်ပေးပြီလို့, သူသည်ခရစ်တော်၏ထမြောက်စေသည်ဟုဆို, သူကသူ့ကိုထမွောကျမဟုတ်ပြီးမှ, လျှင်, တကယ်ပါပဲ, သေလွန်သောသူတို့သည်နောက်တဖန်မထကြဘူး.
15:16 သေလွန်သောသူတို့သည်နောက်တဖန်မထကြပါလျှင်အဘို့, သို့ဖြစ်လျှင်, ခရစ်တော်၏နောက်တဖန်ထမြောက်တော်မူပြီမဟုတ်.
15:17 သို့သော်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မမူလျှင်, ထို့နောက်သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်၏; သင်ဆဲသင်၏အပြစ်များအတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်များအတွက်.
15:18 ထိုအခါ, လွန်း, ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်. အိပ်ပျော်သောသူတို့သည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ကြပြီမယ်လို့.
15:19 သာယခုဘဝခရစ်တော်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိသည်ဆိုလျှင်, ထို့နောက်ကြှနျုပျတို့ရှိသမြှတို့သညျထကျပိုစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်ကြ.
15:20 ယခုမူကား, ခရစ်တော်သည်သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူပြီ, အိပ်ပျော်သောသူတို့၏အဦးပထမဦးဆုံးအသီးအပွအဖြစ်.
15:21 မုချမျာ​​းအတွက်, သေခြင်းတရားသည်လူတဆင့်ရောက် လာ.. ဆိုတော့, အသေ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည်လူတဆင့်ရောက် လာ.
15:22 ထိုအဖွင့်ကိုအာဒံ၌ရှိသကဲ့သို့အားလုံးသေဆုံး, ထိုနည်းတူခရစ်တော်အတွက်အားလုံးအသက်တာကိုဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်,
15:23 မိမိအသင့်လျော်နိုင်ရန်အတွက်ဒါပေမဲ့အသီးအသီး: ခရစ်တော်, ပထမဦးဆုံးသီးသောအသီးအဖြစ်, လာမည့်, ခရစ်တော်၏နေသောသူတို့ကို, မိမိအထွန်းကိုယုံကြည်ကြသူ.
15:24 ယင်းနောက်ဆုံးသည်, သူသညျဘုရားသခငျနိုငျငံတျောသညျအပျေါခမညျးတျောပေးအပ်ခဲ့ကြလိမ့်မည်သည့်အခါ, သူအားလုံးအာဏာစက်ကိုမှုတ်မည်သည့်အခါ, နှင့်အခွင့်အာဏာ, နှင့်အာဏာ.
15:25 အဘို့သူ့ကိုစိုးစံသည်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, ခြေဘဝါးတော်အောက်၌ရှိသမျှသူ့ရဲ့ရန်သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်သည်အထိ.
15:26 နောက်ဆုံးအနေနဲ့, သေဆုံးဟုခေါ်တွင်ရန်သူဖျက်ဆီးရမည်. ခြေဘဝါးတော်အောက်၌ရှိသမျှသောအရာတို့ကိုချထားပြီ. ထိုအခါသူကပြောပါတယ်ပေမယ့်,
15:29 ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, what will those who are being baptized for the dead do, if the dead do not rise again at all? Why then are they being baptized for them?
15:31 Daily I die, by means of your boasting, ကိုညီအစျ: you whom I have in Christ Jesus our Lord.
15:32 အကယ်., according to man, I fought with the beasts at Ephesus, how would that benefit me, if the dead do not rise again? "ကျွန်တော်တို့ကိုအစာစားခြင်းနှင့်သောက်စို့, for tomorrow we shall die.”
15:34 နိုးနိုးကြားကြားဖြစ်, သင်ရုံမြားကို, နှင့်ပွစျမှားဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်ပါဘူး. For certain persons have an ignorance of God. I say this to you with respect.
15:35 သို့သော်တစ်စုံတစ်ဦးကပြောပါစေခြင်းငှါ, "နောက်တဖန်သေခြင်းမှထမြောက်ပြုပါကဘယ်လို?"သို့မဟုတ်, "ခန္ဓာကိုယ်၏အဘယျ type ကိုသူတို့နှင့်အတူပြန်လာကြပါ?"
15:36 ဘယ်လိုလူမိုက်တို့! သင်သည်အဘယ်သို့မျိုးစေ့ကိုကြဲအသက်ပြန်ရှင်ဖို့ယူဆောင်မရနိုငျ, ဒါဟာပထမဦးဆုံးကွယ်လွန်မဟုတ်လျှင်.
15:37 ထိုအသင်သည်အဘယ်သို့မျိုးစေ့ကိုကြဲအနာဂတ်၌ဖြစ်လတံ့သောကိုယ်ထည်မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ရှင်းလင်းသောဘောဇဉ်, ထိုကဲ့သို့သောဂျုံအဖြစ်, သို့မဟုတ်အချို့နဲ့အခြားစပါး.
15:40 လည်း, there are heavenly bodies and earthly bodies. But while the one, မုချ, has the glory of heaven, the other has the glory of earth.
15:42 ဒါကြောင့်သေလွန်သောသူတို့သည်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတို့နှင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်. အဘယ်အရာကိုအကျင့်ပျက်ခြစားမှုအတွက်ပျိုးကြဲလျက်ရှိ၏မပုပ်မှထမြောက်ကြလိမ့်မည်.
15:43 အဘယ်အရာကိုအသရေရှုတ်ချစိုက်သောအခါဂုဏ်အသရေမှထမြောက်ကြလိမ့်မည်. အဘယ်အရာကိုအားနည်းခြင်းအဖြစ်၌ပျိုးကြဲလျက်ရှိ၏အာဏာထမြောက်ကြလိမ့်မည်.
15:44 အဘယ်အရာကိုတိရစ္ဆာန်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူပျိုးကြဲလျက်ရှိ၏ဝိညာဏကိုယ်နှင့်အတူထမြောက်ကြလိမ့်မည်. တိရစ္ဆာန်ခန္ဓာကိုယ်ရှိပါလျှင်, ဝိညာဏတဦးတည်းလည်းရှိပါတယ်.
15:45 ဒါဟာပထမဦးဆုံးလူကိုသည်ဟုရေးသားခဲ့သကဲ့သို့, အာဒံကို, အသက်ရှင်သောသတ္တဝါဝိညာဉျသဖြင့်လုပ်သောခဲ့သည်, ဝိညာဉ်အသက်ပြန်ရှင်ဖို့ယူဆောင်နှင့်အတူဒါနောက်ဆုံးဖြစ်သောအာဒံကိုဖန်ဆင်းခံရကြလိမ့်မည်.
15:46 ဒါကြောင့်ကားအဘယ်သို့, အစဦးတွင်, ဝိညာဉ်ရေးရာမဟုတ်, ဒါပေမယ့်တိရိစ္ဆာန်, လာမယ့်ဝိညာဉ်ရေးရာဖြစ်လာ.
15:47 ပထမလူ, မွကွေီးဖြစ်ခြင်း, မြေကြီးတပြင်ခဲ့သည်; ဒုတိယလူ, ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူဖြစ်ခြင်း, ကောင်းကင်ဘုံ၏ဖွစျလိမျ့မညျ.
15:48 မြေကြီးတပြင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ကဲ့သို့သောအရာများကိုအမွကွေီးများမှာ; မိုဃ်းကောင်းကင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ကဲ့သို့သောအရာများကိုအကောင်းကင်ဘုံရှင်များမှာ.
15:49 ဆိုတော့, ကျနော်တို့မွကွေီးကဘာလဲဆိုတာ၏ပုံရိပ်ကိုသယ်ဆောင်ကြမယ့်အဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းကောင်းကင်ဘုံရှင်အဘယျ၏ပုံရိပ်ကိုသယ်ဆောင်ပါစေ.
15:50 Now I say this, ကိုညီအစျ, because flesh and blood is not able to possess the kingdom of God; neither will what is corrupt possess what is incorrupt.
15:51 အကယ်, I tell youamystery. မုချ, we shall all rise again, but we shall not all be transformed:
15:53 ထို့ကြောင့်, it is necessary for this corruptibility to be clothed with incorruptibility, and for this mortality to be clothed with immortality.
15:58 ဆိုတော့, my beloved brothers, be steadfast and unmovable, abounding always in the work of the Lord, knowing that your labor is not useless in the Lord.
1 ကောရိန္သု 16
16:11 ထို့ကြောင့်, let no one despise him. အဲဒီအစား, lead him on his way in peace, so that he may come to me. For I am awaiting him with the brothers.
16:13 နိုးနိုးကြားကြားဖြစ်. Stand with faith. Act manfully and be strengthened.
16:15 And I beg you, ကိုညီအစျ: You know the house of Stephanus, and of Fortunatus, and of Achaicus, that they are the first-fruits of Achaia, and that they have dedicated themselves to the ministry of the saints.
16:18 For they have refreshed my spirit and yours. ထို့ကြောင့်, recognize persons such as this.
16:20 All the brothers greet you. သန့်ရှင်းသောနမ်းဖြင့်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်ကြလော့.
16:21 This isagreeting from my own hand, ရှင်ပေါလု.
16:22 If anyone does not love our Lord Jesus Christ, သူ့ကိုကျိန်ဆဲနိုင်သည်ဖြစ်ပါစေ! Maran Atha.
16:24 My charity is with all of you in Christ Jesus. အာမင်.